Lenovo adịghị ezube ịzụlite ya sistemụ arụmọrụ na Gam akporosis
Mgbe ekpughere ndị US machibidoro Huawei y ihe ọ bụla pụtara, ụlọ ọrụ China kwuru na ọ na-akwadebe kemgbe afọ gara aga maka mmemme dị otú ahụ, nke ị hụrụ ya ka ọ na-abịa.
Ntughari ohuru ohuru na egwu di n'elu ulo oru ndi China ndi ozo, dabere na ha aghaghi imetuta ha site na mba America. Lenovo, n’akụkụ ya, o yighị ka ọ na-enwe nchegbuỌfọn, ọ welitebeghị otu mkpịsị aka ime nke a, dịka Huawei na-eme nwa oge.
Huawei na-echebe onwe ya nke ọma, ya mere na ejideghị ya na nzuzo n'ọhịa. Ọ na-echekwa ụfọdụ isi ihe nwere ike imebi site na US veto, na-emepe ya nwee OS maka smartphones na ịmepụta ngbanwe ya maka Playlọ Ahịa Google.
Lenovo Legion sub-ika
Agbanyeghị, CEO nke Lenovo Group kwuru nke ahụ onye na - eme PC buru ibu n’uwa adighi eme atụmatụ iwulite sistemu ma obu igwe ya, n'agbanyeghị ụjọ na-arịwanye elu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ahụ maka nkà na ụzụ ndị China nwere ike ịnwe otu ihe ahụ dị ka Huawei.
Na nkowa, mgbe ọ na-enye nkọwa, onye isi ụlọ ọrụ Lenovo Yang Yuanqing kwuru, sị: “Lenovo ezubereghị iwulite sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ ibe, ebe ọ bụ na ijikọ ụwa ọnụ ka bụ ihe a na-apụghị izere ezere. Ya mere, ọ dịghị mkpa ka ụlọ ọrụ bụrụ ọkachamara n'ihe niile. Anyị ga-arụ ọrụ nke anyị ma anyị ga-eme ya nke ọma ”. Na nke a ọ gbakwunyere na ụlọ ọrụ ahụ ga-anọgide na-akwado ndị mmekọ tụkwasịrị obi iji nye ndị ọrụ ngwaahịa kachasị mma.
Okwu onye isi ụlọ ọrụ ahụ na-abịa ụbọchị ole na ole mgbe Huawei gbakwunyere na ahia ahia nke United States maka mmekọrịta ya na-enyo enyo na gọọmentị China, na-egbochi ụlọ ọrụ ahụ ịzụrụ teknụzụ America. Nke a na-ebilite iji mee ka obi jụrụ ma dokwuo obi abụọ nke ndị na-azụ ahịa, n'etiti esemokwu nke United States na China.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Lenovo adịghị ezube ịzụlite usoro sistemụ na ibe ya
Etu esi mara nọmba ekwentị gị na gam akporo